हंगामा मच्चाएको यी चर्चित शिर्ष ६ जना नेताको लभ अफेयर ! – Halkhabar kura
६ चैत्र २०७७, शुक्रबार १६:१०
हंगामा मच्चाएको यी चर्चित शिर्ष ६ जना नेताको लभ अफेयर !
एजेन्सी । भारतमा केही यस्ता चर्चित राजनीतिज्ञहरु छन् जो लभअफेयरका कारण ठुलै विवादमा परे । वरिष्ठ नेता भएका कारण पनि उनीहरुले ठुलै दबाब झेल्नु पर्यो ।मिडियाले उनीहरुको लभअफेयरलाई लिएर ठुलै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको थियो । भारतका यी ६ जना नेताहरु जो प्रेम सम्बन्धका कारण व्यापक विवादित बने ।
उत्तराखण्ड र उत्तर प्रदेशका पुर्वमुख्यमन्त्री तीन जना युवतीसँग एउटै बेडमा फेला परेको समाचार बाहिर आएको थियो । उनी राजभवन रेसिडेन्समा यौन क्रियाकलाप गर्दै गरेको अवस्थामा फेला गरेको खबर बाहिर आएको थियो । उनीमाथि यौ,’न हिं’सा गरेको आरोप पनि लागेको थियो । पछि उनले माफी पनि मागेका थिए
उनले सुरुमा आफुलाई लक्षित गरेर यस्तो आरोप लगाइएको बताएका थिए । तर, पछि आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेका थिए ।रोहित शेखरले उनीमाथि आफ्नो पिता भएको दाबी गर्दै अदालतमा मुद्धा हालेका थिए । पछि उनले मुद्धा पनि जिते । मुद्धा जितेपछि तिवारीले शेखरकी आमासँग ८८ वर्षको उमेरमा विवाह समेत गरेका थिए । नेपालीपत्र बाट
Previous एमाले फुटैको संघारमा पुग्दाखेरि ओली समूहले किन यसरी नाचगानसहित उत्सब मनायो (भिडियो)
Next आफूविरुद्ध मुद्दा चलाए अख्तियार प्रमुखको ‘सात पुस्तालाई दुःख दिने’ माधव नेपालको चेतावनी